izinqubo Okoloigrovye eminyakeni yamuva nje siye beze ukuba luthathe niche kubaluleke kakhulu kulemboni. Manje ezihlukahlukene ethandwa kakhulu impumelelo, izinto uqala bephonsa ngokuhamba umdlalo, kanye nezinye izindlela eziningi zisebenzisa imidlalo ye-computer ngqo hhayi kuphela inqubo ngokwayo, kodwa futhi noma sokuhlela eminye imisebenzi ehambelana nazo. Futhi eziningi ukuthi ungakwazi ukunikeza platform "Umusi ', okuyinto kude ethandwa kakhulu emhlabeni. Lapha kukhona achivki, futhi emakethe ayo ukuhwebelana izinto, futhi okubaluleke kakhulu, amakhadi ezikhethekile collectible ukuthi zikhona amaphrojekthi amaningi. Lesi sihloko uzobe anikelwe lesi sihloko. Kakhulukazi ukugxila kanjani ukuthola ikhadi ku "isisusa", njengoba abadlali abaningi phansi ukubaluleka kwabo.
Ngakho, uma ufuna ukufunda ukuze uthole ikhadi ku "isisusa", kufanele kuqala uzijwayeze yokuthi abakubonisayo. Wonke umdlalo, elithengiswa ngokusebenzisa yesikhulumi has eziningana izici, abalwe ekhasini wakhe. Kube ingashiwo, iphrojekthi yakhelwe yokudlulisela olulodwa noma multi-yomsebenzisi, uma aphambe ekuphepheni inikwe amandla kungenzeka ukusebenzisa isilawuli nokunye. Kubandakanya lapho ungathola ukuthi lo mdlalo ohilelekile iphrojekthi yokudayisa amakhadi. Futhi uma impendulo inguyebo, khona-ke ungakwazi ukubona ukuthi ngayinye yalezi imidlalo has a isethi ezithile amakhadi collectible ukuthi ungakwazi ukuqoqa in yokusungula yakhe. Ngezinye izikhathi isethi kungase kuhilele amakhadi emihlanu kuphela, futhi ngezinye izikhathi ezingaphezu kweshumi. Kodwa lokhu namanje izingcezu ezincane kakhulu kolwazi: sekuyisikhathi sokuba ufunde mayelana nendlela uthole ikhadi ku "isisusa".
Uma uthenge umdlalo iqhaza kuhlelo lwe-yokudayisa amakhadi, kusho udinga ulufaka kanjani kubo. Kunezindlela ezahlukene, kodwa ukuqala Yiqiniso, kufanele kube main futhi ezivamile. Kanjani ukuze uthole ikhadi "isisusa"? Impendulo ilula: salokhu udinga nje ukudlala imidlalo ethize. Project ngamunye has inombolo ethile amakhadi elizowela kini in yokusungula yakho ekupheleni kwenkathi ethile ngesikhathi sokudlala okuqhubekayo. Kwamanye, kuba imizuzu eziyishumi imidlalo, kodwa futhi kukhona labo lapho ngesikhathi esinikeziwe isigamu sehora. Ngakho, udinga kuphela ukuchitha emdlalweni othize ethile isikhathi ukuze uthole amakhadi atholakalayo. Ngeshwa, ngeke ukwazi ngaleyo ndlela ukuqoqa iqoqo eliphelele, njengoba lokhu indlela uzoqala bephonsa kuphela cishe isigamu sezindela lonke inani amakhadi. amakhadi Collectable ku "isisusa" kunemingcele, okuzoxoxwa olwengeziwe.
Njengoba wazi, ngesikhathi umdlalo awukwazi ukuthola ngesikhathi esisodwa wonke amakhadi ukwakha iqoqo eliphelele. Kukhona imikhawulo ehlukile ukukhawulela inombolo amakhadi ukuthi uthola ngosizo ngempango in the game. amakhadi Collectable ku "isisusa" ukuwa in imali enjalo kutakhela kwesigamu iqoqo. Lokhu kusho ukuthi uma nje iqoqo amakhadi eziyisishiyagalombili ke usuphelelwe umdlalo ezine kuphela, futhi phakathi kwabo kungenzeka okufanayo. Ngakho, abathuthukisi kanye abanikazi yesikhulumi "Umusi 'push abadlala ukubheka ezinye izindlela zokuthola amakhadi. Futhi ke ukufunda ukwenza amakhadi ku "isisusa", okuyinto ungenawo okwanele ukuba awuqede iqoqo, kanye indlela yokwenza lawo makhadi imadlana.
Ngaphambi kokuthi udlulele cabangela indlela yokwenza ikhadi "isisusa", kubalulekile ukuba banake esinye isici, mayelana nokuthi iziphi izinhlelo akufanele sikhohlwe noma kunjalo. Iqiniso ukuthi "isisusa" kukhona into okuthiwa "booster iphakethe" - block encane amakhadi ezintathu ukuthi ungathola okwengeziwe. Isebenza kanjani? Uma uthola inombolo enkulu lemakhadi ngempango mdlalo, i-akhawunti yakho kuloluhla walabo etholakalayo iphakethe booster. Futhi lapho omunye ungumdlali Kraft isithonjana (lokhu kuzoxoxwa ngakho kamuva) kuzo zonke uhlu abadlali wathola amakhadi abo nge imidlalo, is ngezikhathi abakhethiwe lucky othola amakhadi ezintathu ezengeziwe. Futhi uma uke wazibuza ukuthi kungani lelo kuphakamisa ku "isisusa" ezingeni, ngokwengxenye ngenxa esiphakamayo amaphakethe. Iqiniso liwukuthi yilowo nalowo amazinga eziyishumi ithuba ukuthi iphakethe booster uzothola yona luyanda ngamaphesenti amabili, okungukuthi amazinga amahlanu kakade kabili amathuba abo. Usuvele uyakwazi ukuthi ikhadi ezinikezwe "isisusa" ngakho manje nani nazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukukhulisa izinga lakho. Ngakho ungathola booster okuningi.
Sekuyisikhathi ukhulume iqiniso lokuthi ukunikeza ikhadi "isisusa" ngaphezu iqoqo elihle. Usuvele uyakwazi ukuthi ukuqoqwa egcwele ngempango kule mdlalo ngeke ikwazi ukuqoqa, ngakho kufanele ubheke emakethe "isisusa". Kube uzokwazi ukuthenga lezo amakhadi ukuthi ziyashoda, for imali yangempela. Kungokufanayo etholakala kolunye uhlangothi: awukwazi ukuchitha imali bese uhola kubo, uma ungafuni ukuqoqa amakhadi ngoba umdlalo othize. Wena uyakwazi uwafake ukuwudayisa, kanye abadlali abangenawo ngokwanele lokhu, cishe ukuze ufuna ukuthenga zona ukuthi usethe intengo. Ngakho, uthola ithuba noma imali amageyimu amasha, ngokungacabangi noma usebenzisa imali ukuze uqedele iqoqo yabo. Awu, manje ukuthi kungani udinga ikhadi "isisusa" ngokwezezimali.
Exchange amakhadi nabangani
Ngokwemvelo, uma kakade kangaka, kuhlanganise nokwenza amakhadi ku "isisusa", njengoba sithengiselane, ungaya ku-futhi. Iqiniso lokuthi ekutholeni amakhadi kwesokudla ungakwazi kalula ubone ukuthi eduze ezinye zazo isithonjana siyavela nge avatar of ngokungaphezu kwabangane bakho. Lokhu kusho omunye izinto ezimbili: kuphakathi kokuthi umngani wakho ufuna ikhadi ukuthi kutholakala kuwe, noma ukuthi unesikhathi ikhadi ukuthi ufuna. Bese ungakwazi ithintane naye futhi bavumelane exchange okulingana, noma umcele ukuthengisa ikhadi ushibhile noma ngisho yona. Ngakho, wena uyokwazi ukusebenzisa inani elikhulu abangane "isisusa" izinjongo zabo, kanye ukusiza laba bangane, uma kuzodingeka amakhadi badinga. Ngakho ungathola ikhadi eshibhe ku "isisusa", ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuqedela iqoqo lakho.
Ungathola ikhadi ezishibhile ku "isisusa", kodwa ngezinye izikhathi ungase uphawule ukuthi ezahlukeneyo ezithile amakhadi abiza kakhulu kunabanye. Yehluka zonke lezo banayo luhlaka esiliva. Ngokuvamile, abadlala ukubabiza ucwecwe-amakhadi, ngoba ngesiNgisi banayo lelo gama - ucwecwe amakhadi. Uyini umehluko kusuka amakhadi evamile? Okokuqala, ziyivelakancane okuningi, ngakho cishe uyothola endaweni ethile ucwecwe-ikhadi mahlanu ezivamile, futhi kuba kuphela endabeni engcono. Yingakho kukhona ngezinye izikhathi kumbe eqolo kakhulu kusukela ambalwa amashumi amasenti ukuze zamadola eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa. Ngakho, ngokuthengisa ikhadi elinjalo, uzokwazi ukusithenga noma ngisho abasha abambalwa. Metal amakhadi ku "isisusa" - kuyinto engavamile kakhulu, ngakho uphawu ukuthi acatshangelwe nabo, kuyoba ohlonishwa kakhulu. Futhi njengoba sikhuluma izithonjana, kuwufanele ebheke ngokuningiliziwe.
Umsebenzisi iphrofayela "Umusi" ungase nje kubonakala ezihlukahlukene imifanekiso egqamile futhi ezimibalabala. abazange Nivelaphi? Impela wamane, basuke futhi kuhlobene amakhadi zokuhweba. Ngakho, uma ukuqoqa iqoqo eliphelele namakhadi umdlalo othize, ungakwazi ushiye nabo yokusungula yakho futhi ngizibuke. Nokho, kukhona okunye ukukhetha - acatshangelwe eyodwa isithonjana, okuyinto uzokunika ethile nakho ukukhulisa "isisusa" yakho. Futhi-ke, ungakwazi abeke uphawu obala ku iphrofayela yakho. Phakathi kwezinye izinto, uthola ngemuva okungahleliwe nokuthi isithonjana kusukela ukuqoqwa imidlalo, kanye kwezinye izimo isigqebhezana isaphulelo for imidlalo ethile ehlobene nalokhu. Njengoba ubona, isithonjana - lena yinto ewusizo kakhulu, ngakho-ke kungenzeka siqoqe kahle amakhadi nje ukuqoqa kwabo akuyona, futhi imifanekiso, njengoba nje kuvamile namanje steeper kakhulu.
Njengoba ungase ucabange, amakhadi aphindaphindwe, okusho ukuthi ungakwazi ngumnikazi nje ngaphezulu amakhadi efanayo. Kungani uludinga? Ngokwemvelo, unelungelo ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuqeda povtorok, ukuhola imali ngokwabo. Kodwa uma uhlela ukuqoqa amakhadi ukudala isithonjana, bese musa ukusheshe ukuthengisa povtorki: kuyodingeka basalokhu. Iqiniso lokuthi isithonjana uthola emva ekubumbeni, kungase kubonakale wena umxhwele kakhulu. Futhi ngempela okunengqondo, ngoba eqinisweni kukhona amazinga ezinhlanu ngayinye imifanekiso umdlalo. Futhi ukuze andise isithonjana ezingeni, uzodinga kabusha babuthane iqoqo amakhadi ngokuphelele. Yingakho akufanele ugijimele ingxenye nge povtorkami uma uhlela ukuqoqa amabheji. Ngalinye ezingeni isithonjana entsha ikunika umuzwa nakakhulu futhi yangemuva engavumelekile itholakala mzwelo ezengeziwe, futhi kuthuthukisa ukubukeka isithonjana.
Uhlelo for the amakhadi ngempango
Ekuphetheni, kufanele siphindze ukukhuluma mayelana nezinhlelo ezikhethekile esetshenziswa abaqoqi ikhadi. Uma ujwayelene kanjani amakhadi bawe "isisusa", ngakho-ke kumele baqonde ukuthi ukuze bathole zonke izinto etholakalayo ngeke udinga ukufaka eziningi imidlalo futhi bachithe nabo isikhashana. Ngokwemvelo, akusiyo zonke Gamer has isikhathi. Kungenxa yalesi futhi weza uhlelo ezifana Master Idle. Ingqikithi yalo lolu hlelo itholakala lokuthi ukuthi ungakwazi uyivule futhi uthole ikhadi, ngaphandle kokuba kudingeke ufake Gameplay. Ukuze uqale, udinga ukulanda futhi ufake uhlelo. Khona-ke wena uyisebenzise futhi sigcina izimo ezimbili ezidingekayo. Okokuqala, udinga ukufaka "Umusi" ukwenza kube ukusebenza parallel ohlelweni. Okwesibili, kudingeka ungene ngemvume ukuze lolu hlelo ngokusebenzisa iklayenti yayo "Umusi", ezenzeka ngenkathi ephakathi uxhumano kanye uhlelo likwazi ukufinyelela ikhasimende lakho. Yilokho, futhi ngemva kwalokho magic wangempela uyaqala.
Inqubo yokuthola amakhadi
Uma efakwe uhlelo futhi usethe wonke amasethingi, zonke izimo, kufanele ubone inani imidlalo lapho kusenabantu amakhadi nedropnutye, kanye nenani amakhadi ngqo uqobo. Elingezelelako awudingi lutho. Shiya uhlelo zisesimweni ukusebenza, futhi kungaba ngokwabo ulale, iya ku ibhizinisi nokunye. Ngalesi sikhathi, i-computer yakho izosetshenziswa nge-othomathikhi usethe futhi ugijime imidlalo kudingekile, bayoba hang ngemuva isilinganiso esifanele ngesikhathi, bese ivaliwe futhi zisuswe. Awunayo usisebenzisa on wesibili ngesikhathi sabo mahhala, kodwa uthole wonke amakhadi, okuyinto kuyoba kufinyeleleke ngokusebenzisa iconsi.
Kuthiwani uma IDirectX 9 akunakwenzeka ukuqalisa, GTA 5 kungaqali?
Isifo Lumbago: it is ekamelweni efanayo, kuba buhlungu eqinile
Imincintiswano bukhoma ngoba wedding yokugubha usuku
Ukuhlobisa kwezikhathi zobukhosi - ukuhlobisa i-Richelieu
Izindlu UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki zomhlaba - phezulu ubuhle yezakhiwo
Nini futhi kanjani ukutshala peonies?
Grinders - Shoes for ubuntu kanye nezenzo oluvelele